2012 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အမှောင်မြင်း Killer ဂန္ထဝင်သံသရာ ~ motorboxer | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (34566)
'01 1500 FI Drifter, အဘယ်သူမျှမမီးပွား - Kawasaki ဖိုရမ် (10877)
Bajaj Avenger 220: တစ်ဦးကဘက်စုံပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ကယ် Blo ... (9839)
MZ စမှတ်စုများ - Philadelphia တွင်မွငျးစီးစဝီကီ (9465)
ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ relay ကိုအမျိုးအစားများအပေါ်မှတ်စုများ (သတိပေးခြင်း: မှိုင်းခြင်းနှင့်ငြီးငွေ့စရာ ... (8948)
VP ပြိုင်ပွဲလောင်စာနောက်ဆုံးရသတင်းများ: VP UNLEADE မိတ်ဆက် ... (8554)
KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ (7938)
Kawasaki ZXR 750 - မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, သတင်း & Advi ... (7198)
ဟွန်ဒါ Wave ကို 125 လက်စွဲပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန်စာအုပ်များပြန်လည်ပြုပြင် (7120)
Peugeot မြန်နှုန်း Fight2အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလက်စွဲစာအုပ်ပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန် ... (6990)
Yamaha ထုတ်လုပ်မှု Tesseract ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်? RideA ... (6484)
bajaj Pulsar 150 ပုံစံ, ဆန်းစစ်ခြင်း, နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ... (6135)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (5650)
KTM Duke 125/200 RaceDynamics PowerTRONIC afte ရ ... (5443)
ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 (5339)
Home → အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် → 2012 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အမှောင်မြင်း Killer ဂန္ထဝင်သံသရာ ~ motorboxer
20 Jun 2015 | Author: dima | Comments Off on 2012 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အမှောင်မြင်း Killer ဂန္ထဝင်သံသရာ ~ motorboxer
I spent the Labor Day weekend with an Indian Chief Dark Horse motorcycle. I picked it up on Friday and kept it until Tuesday. I rode the heck out of it and put on over 500 miles during which time I had fun putting it through its paces. အဆိုပါ 2012 Indian Dark Horse . rigid mounted fuel-injected 105 Cubic Inch Power-Plus V-Twin engine, 6-speed Trans, and Brembo disc brakes.
The Indian Chief Dark Horse Suspension front has 41mm hydraulic telescoping forks with 4.25 ခရီးသွား. The rear isamono-shock design (under the seat) with preload adjustments and just less than3ခရီးသွား. It smoothed out the bumps in the road but not so much that you couldn’t feel them.
The Indian Chief Dark Horse Handling Once on the road, the Dark Horse handles very well. It is very agile despite its 750 ပေါင်. The problem is doing Parking Lot maneuvers.
ဘီဘီစီ TopGear မဂ္ဂဇင်းအိန္ဒိယတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်
Corbin Furniture Collection – အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် 800-538-7035
Other articles of the category "အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်":
ပထမဦးဆုံးအစီးနင်: 2014 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic, Vintage and...
11.06.2015 | Comments Off on ပထမဦးဆုံးအစီးနင်: 2014 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic, စပျစ်သီးနှင့်မင်းတို့ကလည်း – Cycle News
Brammo Enertia ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို စမတ် eScooter ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype Ducati 60 တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် Ducati Diavel ဆူဇူကီး Colleda CO ဆူဇူကီး AN 650 ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 ဟွန်ဒါ DN-01 စက်ဘီး Kawasaki ER-6n အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic Moto Guzzi 1000 Daytona Injection ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix Aprilia Mana 850 Ducati Desmosedici GP11 Bajaj Discover
စနေနေ့ | 20.06.2015 | Comments Off on Kawasaki Ninja 650R 2012 အိန္ဒိယတွင်စျေး & အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
စနေနေ့ | 20.06.2015 | Comments Off on 2009 ဟွန်ဒါ CB1000R လမ်းမကြီးစမ်းသပ်ခြင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း- ဟွန်ဒါ CB1000R မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ
စနေနေ့ | 20.06.2015 | Comments Off on ပြောက်: Moto Guzzi နော်ဝေအလှမယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
စနေနေ့ | 20.06.2015 | Comments Off on 2009 Kawasaki Vulcan Voyager 1700 ဆန်းစစ်ခြင်း – အဆုံးစွန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
စနေနေ့ | 20.06.2015 | Comments Off on ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166
Comments Off on Ducati Monster 696 အထူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြိုင်ပွဲရောင်းအားပုဂ္ဂိုလ်ရေးက်ဘ်ဆိုက်
Comments Off on တစ်ဦး Harley rocker ECM eHow Install လုပ်နည်း
1991 BMW 850 V126မြန်နှုန်းမူလစာမျက်နှာစာမျက်နှာ